Archive du 20191113
ACMIL Antsirabe Mampiahiahy ny nahafaty ilay mpanamory…
Mpianatra ho manamboninahitra mpanamory fiaramanidina Antsoina hoe Rakotoson Mamimaherimanana Andrianina, 33 taona anisan’ireo afa-panadinana ho mpanamory no namoy ny ainy.
Biletà tokana « Tsy hisy ny fahatarana », hoy ny CENI
Distrika 101 amin’ireo 119 manerana ny nosy no nahavitana ny fanotana biletà tokana izay fiaraha-miasa amin’ny tranoprintim-pirenena ho amin’ny fifidianana kaominaly sy mpanolotsaina.
Fampielezan-kevitra Tsy taitra intsony ny olom-pirenena
Ao anatin’ny herinandro faharoa ny fanaovana fampielezan-kevitra ho an’ireo kandidà ben’ny tanàna sy mpanolotsain’ny tanàna.
Rina Randriamasinoro « Manana ny vahoaka isika…»
Mihohy ny fampielezan-kevitra ataon’ny Kandida Atolotry ny Antoko TIM eto Antananarivo Renivohitra Rina Randriamasinoro.
Fanendrena governoram-paritra Nangataka ny hevitry ny HCC i Rivo Rakotovao
Mbola mipetraka adihevitra taorian’ny fanendrena ny governoram-paritra ny fanapahan-kevitra noraisin’ny filohan’ny repoblika
Ady amin`ny tsimatimanota Afaka hiasa tsara ve ny HCJ ?
Nisokatra indray ny fanadihadiana mahakasika ireo tompon’andraiki-panjakana ambony nandritra ny fitondrana teo aloha izay voarohirohy amin’ny fanodinkodinam-bolam-panjakana. Minisitra telo no voasaringotra amin’izany.
Vola sandoka Mirongatra rehefa misy fifidianana
Miasa ny vola rehefa vanim-potoan’ny fifidianana toy izao ary tsy azo ihodivirana.
Fiarovana ny zon’olombelona Ratsy toerana i Madagasikara
Nisongadina indray ny fanitsakitsahana ny zon’olombelona, indrindra ho an’ny ankizy sy ny mahakasika ny vehivavy.
Fitsarana faobe Voambolana diso
Tsy misy ny fitsarana faobe na « audience forraine », hoy ny filohan’ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara, Clément Jaona.
BAOLINA KITRA PRO LEAGUE Resin’ny Fosa 3-0 ny 3Fb Toliara
Omaly talata 12 novambra vao notontosaina tao amin’ny kianja Rabemananjara Mahajanga
Minisiteran’ny tanora sy fanatanjahantena Mpiasa 80 no homena fiofanana fitantanan-draharaha
Nanomboka tamin’ny alatsinainy 11 novambra 2019 teo tetsy amin’ny ANS Ampefiloha ka haharitra roa herinandro ny fampiofanana homena an’ireo mpiasa
Edito Tsy mahalala menatra indray
Hiverina hiatrika lalao iraisampirenena indray ny Barea nanao CAN farany teo ny sabotsy izao.
Fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy Hirosoana ny fanatsarana tsikelikely
Hohavaozina miandalana ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy manomboka izao.
Mponin’Ambohidratrimo Mandeha taksibe vao mahita rano vidiana
Velon-taraina tanteraka ireo mponina eny Ambohidratrimo noho ny tsy fisian’ny rano fisotro madio.
Tania, zazavavy kely 10 taona Vehivavy roa no naka an-keriny azy
Tovovavy kely iray vao 10 taona monja antsoina hoe Tania, monina eny Avarabohitra Soavimasoandro no tsy hita nanomboka ny alatsinainy lasa teo.
Lalam-pïofanana lalàna Mbola tena mahaliana ny mpianatra
Anisan’ny lalam-piofanana mbola tena mahaliana ireo tanora mpianatra vao afa-panadinana Bakalôrea amin’izao ny lalàna.